रेडियो सुनेर २१ वर्षमै भलमन्सा भएँ
- प्रेम चाैधरी | काठमाडौं,
साथीहरू नमस्कार म मसुरिया चौधरी...ए.. होइन म त प्रेम चौधरी पो त झुक्किएँछु आफ्ना नाम र ठेगानामा । मसुरियाचाहिँ मेरो ठेगाना ।
बाँकेको मसुरिया भन्ने स्थानमा मेरो घर छ । म त्यहीँको बासिन्दा हुँ । हरेक कार्यक्रममा जाँदा मलाई आफ्नो परिचय दिन असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो । अगाडि धेरै साथीहरू र ठूलाठूला मान्छेहरू देख्दा नामसमेत भुल्ने मान्छे हुँ म ।
एउटा घटना सुनाउँछु है ? केही समयअगाडि म गाउँ विकास समितिस्तरीय बालक्लबको एउटा कार्यक्रममा संयोजकको रूपमा थिएँ । संयोजक भएर के गर्नु, बोल्ने बेलामा नाम भन्नै डर लाग्ने ।
त्यस दिन पनि उही दोहोरियो । सबैले आफ्नो परिचय दिएपछि म पनि परिचय दिन अगाडि सरेँ अनि भनेँ, ‘नमस्कार म मसुरिया चौधरी....ए होइन होइन म त प्रेम हो प्रेम चौधरी ।’ मेरो आफैँप्रतिको अनभिज्ञतालाई देखेर म सँगैका साथी र सहभागीहरू सबै गलल हाँसे । आफैँलाई आत्मग्लानि भयो ।
धत् ! कस्तो हुस्सु रहेछु संयोजक भएर नाम नै बिर्सिएँ । अब के भन्लान् मलाई ? कतै मेरो कार्यक्षमतामा प्रश्न त उठाउँदैनन् ? कतै मलाई सबैले त गिज्याउँदैनन् ? भोलि पनि म आज जसरी निर्धक्कसाथ कार्यक्रममा सम्माननीय पदमा बसेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकूँला र आजको बेइज्जतले ?
हो, यस्तै तर्कनाहरूले मलाई कार्यक्रममा बस्दाबस्दै घेरिसकेको थियो । कार्यक्रमभन्दा पनि लाजले रातोपिरो भइसकेको मलाई कार्यक्रम सञ्चालकले हाँस्दै नआत्तिनुस्, यस्तै हो कहिलेकाहीँ भन्दै सान्त्वना त दिइरहेका थिए तर म भने परिस्थिति झन् असहज देख्दै थिएँ ।
धेरै दिनसम्म लज्जा महसुस भइरह्यो । बोल्न डराउने बानीप्रति ग्लानि पनि भयो । कति दिनसम्म त साथीभाइहरूसामु पनि गइनँ । समाजमा कसैले केही भन्ला कि भनेर टाढै बसेँ ।
एक दिन लाग्यो समस्यासँग कति भाग्ने ? सधैँ यसरी नै भाग्ने कि लखेट्ने ? लखेट्ने भन्नेबित्तिकै दिमागमा एउटा आइडिया फुर्‍यो ब्राखा चराउन जाँदा त्यही लौरोले मेरो डरलाई किन नलखेट्ने भनेर ?
साथीहरू अचम्ममा नपर्नुस् है, लौरोले आफूभित्रको डरलाई कसरी लखेट्छ भनेर । यहाँ मैले लौरो बोकेर बाख्रा लखेट्दा पनि उनीहरूसँग औपचारिक रूपमा बोल्ने । अर्थात् लौरो बोकेर बाख्रालाई धपाउँदा पनि आदरसहित बोलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभ्यास गर्ने ।
यसरी बाख्रालाई अतिथि मान्ने गर्दथेँ । अनि बाख्रा चराउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दथेँ । यसरी गोठालो जाँदा गरेको अभ्यासले मलाई मज्जाले बोल्न सक्ने बनायो ।
गाउँमा तीन वर्षको एउटा परियोजना आयो र लोकस्टार रेडियो स्राेता समूह गठन गरियो । साझा सवाल, साथीसँग मनका कुरालगायतका रेडियो कार्यक्रम समूहमा बसेर सुन्न थालेँ ।
यसरी कार्यक्रम सुन्दासुन्दै मलाई रेडियोमा बोल्ने रहर जाग्यो । आफैँलाई पनि महसुस भयो रेडियो कार्यक्रमले सूचना दिने रहेछ र आफैँसँग सूचना भएपछि बोल्न पनि मज्जाले आउँदो रहेछ ।
मान्छेभन्दा पनि ऊसँग भएको सूचना बोल्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले परियोजना सकिएपछि पनि रेडियो कार्यक्रम सुनिरहेँ ।
यसैबीच जिल्लामा सखी एफएम खुलेपछि केही समय संवाददाता भएर काम गरेँ । केही समयमा रेडियो बन्द भएपछि यो यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो । तर, मेरो रहर भने मरेकै थिएन ।
यस्तैमा फेरि गाउँमा अर्को परियोजना आयो । अनि गठन गरियो मसुरिया रेडियो स्राेता समूह । सहजकर्ता म नै चयन भएँ । यो परियोजनाअन्तर्गत उत्पादन हुने रेडियो कार्यक्रम 'साझा बोली’ सुन्ने र छलफल गर्ने गर्दागर्दै स्थानीय तहका धेरै सवालका बारेमा थाहा भयो ।
देश संघीयतामा गएकाे बखत सुरु भएको यो कार्यक्रम निकै उपयोगी त लाग्यो नै, आफ्नो समूहसहित रेडियो कार्यक्रम सुनेर आफूले धेरै कुरा बुझेँ र अरुलाई पनि बुझाएँ ।
रेडियो स्राेता समूहमार्फत साथीहरूसँगै बालविवाहविरुद्धको, स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला भोट हाल्ने विधिलगायतका बारेमा सडक नाटक प्रस्तुत गर्ने, स्थानीयस्तरका विभिन्न सवालमा जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने, स्थानीय तहको योजना छनाेट प्रक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षणजस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेँ ।
यसरी सामाजिक कार्यमा व्यस्त रहँदारहँदै मलाई गाउँको नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिको रूपमा गाउँलेले औँल्याइसकेछन् । यसरी मलाई १ माघ २०७३ मा थारू समुदायको गाउँको नेतृत्व गर्ने मुख्य व्यक्ति ‘भलमन्सा’ बनाइयो । धेरैले ताली बजाएर स्वागत गरे भने केहीले मसुरिया चौधरी सम्झेरै नाक खुम्च्याएर हाँस्न थाले । अनि उनीहरूसँगै म पनि मख्ख पर्दै हाँस्न थालेँ र सोच्न थालेँ हिजोको मसुरिया चौधरी म बल्ल पो प्रेम चौधरी बनेछु भनेर ।
यसरी २१ वर्षमा गाउँको प्रमुख भएर काम गरेँ ।
अहिले स्थानीय तहका कामकारबाहीबारे खुलस्त रूपमा गाउँलेहरूलाई जानकारी पनि दिने गर्छु । जबजब गाउँलेहरूको बीचमा केही नयाँ कुरा सिकाउन पुग्छु, आफैँजस्तो मसुरिया चौधरीहरू धेरै देख्छु । अनि भन्ने गर्छु, ‘रेडियो कार्यक्रम सुन्न नभुल्नुस् है, रेडियोले हामीलाई पढाउनेदेखि भविष्य बनाउनेसमेत काम गर्छ नि ।’
गरिबीले सिकाएकाे पाठ
अहिले स्नातक अध्ययनरत छु । सानै उमेरमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेको मैले आफ्नो सफलताको स्रोत भने रेडियोलाई नै मान्छु । रेडियोले नै मलाई मसुरिया चौधरीबाट प्रेम चौधरी बनायो ।
त्यसैले साथीहरू, आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न मौका खोज्नुपर्छ, अघि सर्नुपर्छ, जिज्ञासु हुनुपर्छ, सिक्नुपर्छ र निरन्तरता दिनुपर्छ अनि मात्रै सफलता पाउन सक्छौँ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ४, २०७७, ११:१८:००